बुवाको निधन भएको ४ बर्ष सम्म मृ’तक बुवाको नाममा पठाइन म्यासेज, तर ४ बर्ष पछि बुवाको मोबाइल बाट यस्तो म्यासेज आयो जस्ले उनि चकित परिन ! - Kavre Online
बुवाको निधन भएको ४ बर्ष सम्म मृ’तक बुवाको नाममा पठाइन म्यासेज, तर ४ बर्ष पछि बुवाको मोबाइल बाट यस्तो म्यासेज आयो जस्ले उनि चकित परिन !
एजेन्सी / आफ्नो बुवा आमाको निधनको शोक कहाँ सजिलै बिर्सिन सकिन्छ र ? अमेरिकाको अर्कान्ससमा बस्ने एकजना युवतीलाई पनि बुवाको निधनको शोकले लगातार ४ वर्षसम्म पिरोलिरह्यो । धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्दछ, तर उनले मृ तक बुवाको यादमा बुवाको मोबाइल नम्बरमा हरेक दिन एउटा मेसेज पठाइरहिन् । पूरै ४ वर्षसम्म उनले मृ तक बुवाको मोबाइल नम्बरमा मेसेज पठाइन् । एकदिन अचानक उक्त मोबाइल नम्बरबाट उनलाई जवाफी मेसेज आयो । मृ तक बुवाको मोबाइल नम्बरवान मेसेज ? उनी अवाक् नहुने कुरै थिएन ।
गत अक्टोबर २४ का दिन २३ वर्षीया च्यास्टटी प्याटरसनका बुवाको चौथो वार्षिकी थियो । हरेक दिनजस्तै उनले उक्त दिन पनि आफ्ना स्वर्गीय पिताको मोबाइलमा सन्देश पठाइन् । उनले लेखिन्, ‘हेल्लो बुवा, म छोरी हुँ । आजको दिन फेरि निकै मुस्किल हुनेवाला छ । तपाईंलाई गुमाएको चार वर्ष भयो । तर तपाईंको सम्झना नआएको कुनै दिन छैन । मलाई माफ गर्नुहोस्, तपाईंलाई जब मेरो सबैभन्दा धेरै जरुरत थियो, म तपाईंसँग थिइन ।’यस्तै यस्तै लामो मेसेज उनले मृ तक बुवाको मोबाइल नम्बरमा पठाइन् । उनले आफूले ग्राजुएसन गरेको तथा क्यान्सर पनि निको भएको कुरा समेत उल्लेख गरिन् । मृ तक बुवालाई मेसेज पठाउने उनको दैनिकी थियो ।
अगाडि लेखिएको थियो, ‘मैले वर्षौँदेखि तिम्रा मेसेज पढिरहेको छु । तिमी अगाडि बढिरहेको देखेको छु । तिम्रा मेसेजको सुरुमै जवाफ दिन चाहन्थेँ तर मैले तिम्रो मन दुखाउन चाहन्नथेँ । तिमी एक असाधारण छोरी हौं र मलाई विश्वास छ मेरी छोरी आज जिवित हुँदिहुन् त तिमीजस्तै हुने थिइन् । हरेक दिनको अपडेटका लागि तिमीलाई धन्यवाद ।’
यो अद्भुत तथा आश्चर्यजक घटनाका बारेमा चेस्टटीले आफ्नो फेसबुकमा शेयर गरेकी छिन् । उनले आफूले बुवालाई पठाएको मेसेज र उताबाट प्राप्त जवाफको स्कृनशटसमेत पोष्ट गरेकी छिन् । २५ अक्टोबरमा गरिएको यो पोष्टलाई अहिलेसम्म लाखौँले शेयर गरिसकेका छन् । धेरैजना भावुक भएका छन् र ती युवतीलाई अगाडि बढ्न शुभकामना दिएका छन् ।
4,781 Post Views
Prevअन्तिम संस्कारको समय जब ला’सले टाउको हल्लाएपछी…
Nextछोराछोरीको दूधे दाँत सम्हालेर राख्नुस्, काम लाग्छ यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा !
भारतले सीमा मिच्दै छ, सबै नाका बन्द गरेर सेना राखौं : पम्फा भुसाल